चीन क्राइोजेनिक मध्यम आकारको तरल अक्सिजन ग्यास प्लान्ट तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता OR
क्राइोजेनिक मध्यम आकार तरल ऑक्सीजन ग्यास प्लान्ट तरल नाइट्रोजन प्लान्ट
१. साधारण स्थापना र रखरखाव मोड्युलर डिजाइन र निर्माणका लागि धन्यवाद।
२. साधारण र विश्वसनीय अपरेशनका लागि पूर्ण स्वचालित प्रणाली।
High. उच्च शुद्धता औद्योगिक ग्यासहरूको ग्यारेन्टी उपलब्धता।
Liquid. कुनै पनि मर्मत कार्यको समयमा प्रयोगको लागि भण्डारण गर्न तरल चरणमा उत्पादनको उपलब्धता द्वारा ग्यारेन्टी।
5. कम ऊर्जा खपत।
S.शर्ट समय डेलिभरी
यस बोटको डिजाइन सिद्धान्त हावामा प्रत्येक ग्यासको बिभिन्न उमाल्ने बिन्दुमा आधारित छ। एयर कम्प्रेस गरिएको छ, precooled छ र H2O र CO2 को हटान भयो, तब मुख्य तातो एक्सचेन्जरमा शीतल बनाइनेछ जब सम्म यो तरल नभएसम्म। सुधार पछि, उत्पादन अक्सीजन र नाइट्रोजन स collected्कलन गर्न सकिन्छ।
यस प्लान्टले टर्बाइन विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिई एमएस सफा एयरको छ। यो एक सामान्य एयर सेप्टेक्शन प्लान्ट हो, जसले आर्गन निर्माणको लागि पूर्ण सामान भर्ने र सुधार गर्ने कार्य गर्दछ।
कच्चा हावा धूलो र मेकानिकल अशुद्धता हटाउन एयर फिल्टरमा जान्छ र एयर टर्बाइन कम्प्रेसरमा प्रवेश गर्दछ जहाँ हवा ०.9 MP MPaA मा कम्प्रेस गरिएको छ। त्यसो भए यो हावा प्रेकुलि system प्रणालीमा जान्छ, जहाँ हावालाई १℃ डिग्री सेल्सियसमा चिस्याइन्छ। त्यस पछि, यो २ आणविक चलनी विज्ञापन सोर्ब्या tank ट्या to्कमा प्रवाहित हुन्छ, जुन बारीमा चालू हुन्छ, H2O, CO2 र C2H2 को हटाउनका लागि।
शुद्ध भएपछि, हवा विस्तार हुँदै गएको वायुको साथ मिसिन्छ। त्यसो भए यो मध्यम प्रेशर कम्प्रेसर द्वारा संकुचन गरी २ स्ट्रिममा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा अंश मुख्य तापको एक्सचेन्जरमा जान्छ -260K मा चिसो हुन, र विस्तार टर्बाइनमा प्रवेश गर्न मुख्य हीट एक्सचेन्जरको बीचको भागबाट चुस्काइन्छ। विस्तारित वायु पुनः गरम गर्नका लागि मुख्य तातो एक्सचेन्जरमा फिर्ता हुन्छ, त्यस पछि, यो वायु बढावा दिने कम्प्रेसरमा बग्दछ। वायुको अन्य भाग उच्च तापमान विस्तारकर्ता द्वारा बढावा दिइएको छ, चिसो पछि, यो कम तापमान बढाउने विस्तारकर्तामा बग्दछ। त्यसोभए यो चिसो बक्समा जानको लागि चिसो हुन to १K० के। यसको अंश अझै चिसो हुने थियो, र तातो स्तम्भको तल्लो तर्फ हिट एक्सचेन्जर मार्फत बग्नेछ। र अन्य हावा कम प्रलोभनको लागि sucked छ। विस्तार विस्तार भएपछि यसलाई २ भागमा बाँडिन्छ। एउटा अंश सुधारको लागि तल्लो स्तम्भको तल्लोमा जान्छ, बाँकी मुख्य ताप ताप एक्सचेन्जरमा फिर्ता हुन्छ, त्यसपछि यो पुन: गरम गरेपछि एयर बूस्टरमा बग्दछ।
तल्लो स्तम्भमा प्राथमिक सुधार पछि, तरल वायु र शुद्ध तरल नाइट्रोजन तल्लो स्तम्भमा संकलन गर्न सकिन्छ। फोहोर तरल नाइट्रोजन, तरल वायु र शुद्ध तरल नाइट्रोजन तरल वायु र तरल नाइट्रोजन कूलर मार्फत माथिल्लो स्तम्भमा बग्दछ। यो माथिल्लो स्तम्भमा पुन: सुधारिन्छ, त्यसपछि, .6 99..6% शुद्धताको तरल अक्सिजन माथिल्लो स्तम्भको तल्लो भागमा स collected्कलन गर्न सकिन्छ, र उत्पादनको रूपमा चिसो बक्सबाट बाहिर डेलिभर गरिन्छ।
माथिल्लो स्तम्भमा अर्गोन अंशको अंश क्रूड आर्गन स्तम्भमा चुस्दछ। त्यहाँ क्रूड आर्गन स्तम्भका २ भागहरू छन्। दोस्रो भागको भाटा पहिलोको शीर्षमा प्रवाह तरल पम्प मार्फत पठाइन्छ। यो .5 .5.।% एआर प्राप्त गर्न कच्चा आर्गन स्तम्भमा सुधार गरिएको छ। 2ppm O2 कच्चा आर्गन। त्यसपछि यो वाष्पीकरणकर्ता मार्फत शुद्ध आर्गन स्तम्भको बीचमा डेलिभर हुन्छ। शुद्ध आर्गन स्तम्भमा सुधार पछि, (। 99.999%% एआर) तरल आर्गन शुद्ध आर्गन स्तम्भको तल संकलन गर्न सकिन्छ।
माथिल्लो स्तम्भको माथिबाट फोहोर नाइट्रोजन कोल्ड बक्सबाट पनी पुनउत्पादक वायुको रूपमा प्यूरिफायरमा प्रवाहित हुन्छ, बाँकी शीतल टावरमा जान्छ।
माथिल्लो स्तम्भको सहायक स्तम्भको शीर्षबाट नाइट्रोजन चिसो बक्सको बाहिर कूलर र मुख्य ताप एक्सचेन्जर मार्फत उत्पादनको रूपमा प्रवाह गर्दछ। यदि नाइट्रोजन चाहिएको छैन भने, यो पानी कूलि tower टावरमा पठाउन सकिन्छ। चिसो पानी चिसो टावरको क्षमताको लागि पर्याप्त छैन, चिलर स्थापना गर्न आवश्यक छ।
१ ： एयर कम्प्रेसर (पिस्टन वा तेल मुक्त)
२ ： एयर रेफ्रिजरेसन एकाई
A. एयर शुद्धीकरण प्रणाली
： एयर ट्या tank्क
： पानी अलग
： Lec आणविक चलनी शोधक （पीएलसी अटो）
： ： प्रेसिजन फिल्टर
： ： सुधार स्तम्भ
9 oo बूस्टर टर्बो-विस्तारकर्ता
१० ： अक्सीजन शुद्धता विश्लेषक
अघिल्लो: तरल-अक्सीजन-नाइट्रोजन-अर्गोन-उत्पादन-प्लान्टको लागि विश्वसनीय निर्माता
अर्को: क्रायोजेनिक अक्सिजन बोट लागत तरल अक्सिजन बोट लागत
स्वचालित नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन उत्पादन मेसिन प्लान्ट
निर्माता उच्च शुद्धता नाइट्रोजन उपकरण PS ...